Izixazululo - AOOD Technology Limited
Ubuchwepheshe bokuxhumana obudala be-AOOD benziwa ngokuxhumana ngenqwaba yezintambo zebhulashi nebhendi elijikelezayo noma isiyingi esibekwe kushaft. Inamandla amakhulu, isignali kanye nokudluliswa kwedatha, ikakhulukazi igolide ekuthintaneni negolide lingabhekana nesiginali ebuthakathaka noma ukudluliswa kwedatha ngejubane nokugcina ukuthembeka okuphezulu. Isiliva ekuxhumaneni nesiliva ingahlangabezana nesidingo senani eliphansi lokudlulisela amandla okuthembekile.
Isithwebuli se-CT, sidinga indandatho eshibhile enesibhobo esikhulu ukuze kuqinisekiswe ukudluliswa kwamazinga wedatha aphezulu ngaphansi kwejubane lokusebenza. Onjiniyela be-AOOD bathuthukisa ubuchwepheshe bokudlulisa obungathinti lezi zinhlelo zokusebenza. Amasongo esiliphu angaxhumani anikela ngamandla aphakeme kakhulu wejubane noma ukudluliswa kwedatha ngaphandle kwesondlo nempilo yenkonzo ende kunamabhulashi ajwayelekile axhumana namasongo ashelelayo.
Ama-rolling-rings Okuxhumana Nobuchwepheshe
I-AOOD ubuchwepheshe obusha bokugoqa izindandatho busebenzisa izindandatho zokugoqa ukuxhumana nokuqonda ukusebenza kokudluliswa kwendandatho eshibilikayo, esebenzisa amasongo entwasahlobo yethusi ahlanganiswe negolide atholakala phakathi kwezindawo ezimbili eziyigugu zensimbi esikhundleni sokuxhumana okujwayelekile kwendabuko. Inokumelana kokuxhumana okuphansi, ukugqoka okuphansi, umsindo ophansi we-elekthronikhi, isikhathi eside sokuphila namandla aphezulu wokudlulisa wamanje. Yisixazululo sendandatho eshelelayo esiphelele salezo zinhlelo ezidinga usayizi omkhulu, umthamo wamanje ophakeme nezindandatho ezinde zokuphila. Izindandatho ze-AOOD rolling-ring ezixhumana nezindilinga zenza umsebenzi wazo omuhle kwezicelo zezokwelapha, ezokuvikela, ezasemkhathini kanye nokuzulazula.
Izindandatho ze-AOOD mercury slip zisebenzisa ichibi le-liquid mercury ngamangqamuzana ahlanganiswe koxhumana nabo esikhundleni soxhumana nendabuko webhulashi. Umgomo wabo wokuxhumana ohlukile uqinisekisa ukuthi bangagcina ukumelana okuphansi nokuxhumeka okuzinzile kakhulu ngaphansi kwejubane eliphezulu kakhulu lokusebenza, futhi bayakwazi ukudlulisela ku-10000A wamanje nge-pole ngayinye. Izindandatho eziningi zamanje ze-AOOD zamanje ezisetshenziswa kakhulu emshinini wokushisela.
Ukudluliswa kwe-fiber optic kwazalelwa amazinga aphezulu wedatha. Ubuchwepheshe be-AOOD fiber optic bungaqinisekisa kuze kufike kumazinga wedatha ayi-10 Gbit / s noma ngaphansi kwezimo ezimbi kakhulu. Amalunga we-AOOD fiber optic rotary akhiwe ngomzimba wensimbi ongagqwali kuze kufike ekuvikelekeni kwe-IP68, angasetshenziswa cishe kunoma yiluphi uhlobo lwezicelo ezivela kwimishini yezokwelapha, ama-ROV kuya kuma-radar okuqapha ezempi. Ukudluliswa kwe-fiber optic kungahlanganiswa nezindandatho zokuxhumana ezishelelayo zikagesi ukuhlangabezana nesidingo sezinhlelo ze-electro-optic hybrid slip rings.
I-AOOD inikela ngesixazululo sokudlulisa imvamisa ephezulu phakathi kwepulatifomu engaguquki nepulatifomu ejikelezayo, njengamakhamera we-TV, izimoto zasemoyeni ezingenamuntu nezinhlelo ze-radar. I-AOOD ivumela ukuhanjiswa kwesiginali ebangeni lemvamisa kusuka ku-DC kuze kufike ku-20GHz, ukuhlanganiswa kwe-HF rotary kungahlanganiswa nendandatho kagesi njengoba kudingeka.
Abezindaba Rotary Union
I-AOOD inikela ngezixazululo zokudlulisa imidiya ngokudlulisa uketshezi noma amagesi kusuka kumthombo ohleliwe kumthombo ojikelezayo ngenkathi ivumela ukuhamba. Izinyunyana zemidiya ezijikelezayo zisetshenziswa ezinhlobonhlobo zezicelo kusuka kumatafula wokukhomba wokudayela ojikelezayo ukwenza amashini wokucutshungulwa kwensimbi kusetshenziswa imishini yamahlathi yokubacindezela. Indandatho eshelelayo, i-fiber optic rotary joint, ilunga elijikelezayo le-HF kanye ne-encoder ingahlanganiswa nohlelo lwe-rotary union. Noma ngabe udinga izixazululo ezithile zengcindezi ephezulu, isivinini sokusebenza esiphakeme noma amavolumu okugeleza okuphezulu, vele uphonsele inselelo i-AOOD.